काठमाडौं । पछिल्लो समय हुन्डीको कारोवारमा अचाक्ली वृद्धि भएको छ । अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको यो कारोबार बढ्नुमा सरोकारवाला निकायको मौनता नै मुख्य कारण भएको बताइन्छ । पछिल्लो समय विदेशमा रहेका अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरूले नेपालमा हुन्डीको कारोवार गर्दै आएका छन् । हुनता पालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको मानिन्छ । रेमिट्यान्सबाट देशलाई विदेशी मुद्रा प्रात हुन्छ हरेक देशलाई ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आवश्यक हुन्छ । विभिन्न वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्छ । रेमिट्यान्सबाट आएको रकम विदेशी मुद्रामा आउँछ । बैंकले त्यसलाई साटेर नेपाली मुद्रा दिन्छन् । व्यापार घाटालाई मिलान गर्न पनि यही विदेशी मुद्राले सहयोग गरेको छ ।
रेमिट्यान्स औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट आउँछन् । अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रेमिट्यान्स हुन्डी हो । हुन्डी अन्तरदेशबीच पैसा कारोबार गर्ने अवैध तरिका हो । दुवै देशमा सम्पर्क व्यक्तिहरू राखेर यस्तो कारोबार हुने गरेको छ । नेपालबाट भारतमा पैसा पठाउन हुन्डीको भारतमा रहेको एजेन्टले नेपालको एजेन्टलाई खबर गर्छ । नेपालको एजेन्टलाई पैसा दिएपछि भारतको एजेन्टले आफ्नो व्यक्तिलाई पैसा उपलब्ध गराउँछ । यसबापत उनीहरूले केही प्रतिशत कमिसन लिने गर्छन् ।
विदेशबाट पैसा पठाउँदा बैंकिङ च्यानलबाट पठायो भने त्यो रेमिट्यान्समा गनिन्छ भने बैंकिङ च्यानलबाट नभई अन्य दलालहरूमार्फत सिधै पैसा पठाउनुलाई हुन्डी कारोबार भनिन्छ । कार्यथलोमै लिन आउने र घरमै पु¥याइदिने र धेरै शुल्क पनि नलाग्ने भएकाले मानिसहरू हुन्डीमा आकर्षित हुने गरेका छन् । हुन्डीबाट पैसा पठाउँदा बैंकिङ प्रणालीबाट पठाउँदाभन्दा कम समय लाग्ने, पैसाको स्रोत खुलाउने तथा अन्य प्रक्रियागत झन्झट पनि नहुने भन्दै हुन्डीको माध्यम प्रयोग गरेर थुप्रै नेपालीले विदेशबाट पैसा पठाउने गर्दछन् ।
यसरी पर्छ अर्थतन्त्रमा हुन्डीको प्रभाव
हुन्डी रेमिट्यान्स नै भए पनि यो अनौपचारिक माध्यमबाट आउने भएकाले रेमिट्यान्समा गनिँदैन । यसको मतलब हुन्डीले रकम आउने क्रमलाई घटाउँदैन । सरकारी तथ्यांकमा मात्रै नदेखिने हो । सरकारी कोषमा विदेशी मुद्रा आउँदैन । घर परिवारले पाएको रकम बढिरहेको देखिन्छ तर औपचारिक च्यानलबाट आएको रकम भने कम देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रबाट आएको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउँछ । यसले अनधिकृत व्यापार व्यवसायसँगै राजस्वसमेत घटाउँछ । हुन्डी नियन्त्रण हुन नसक्दा अन्य किसिमका अपराध पनि बढेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । नेपालबाट ठूलो मात्रामा लागूऔषध विभिन्न देशमा जाने गरेको छ । यसरी बिक्री हुने लागूऔषधको पैसा नेपालमा अवैध तरिकाबाट नै आउने गर्छ । हुन्डीको अनुसन्धान नै नहुने भएकाले निर्बाध रूपमा अर्बौं रकम यसकै माध्यमबाट लेनदेन हुने गरेको छ ।
हुन्डीको अवैध कारोबारसँगै सुन तस्करी पनि मौलाएको छ । लागूऔषध, हतियार तथा सुनलगायत सामान तस्करीमा पनि हुन्डीमार्फत नै आर्थिक लेनदेन हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार नेपालमा पछिल्लो समय दैनिक सय किलोभन्दा धेरै सुन तस्करी हुने गरेको छ भने त्यसको लेनदेन हुन्डीमार्फत नै हुने गरेको छ । त्यस्तै, आतंकवादी क्रियाकलापको पैसा पनि हुन्डीमार्फत नै एक देशबाट अर्काे देशमा पुग्ने गरेको छ ।
हुन्डी कारोबार गर्दाका हानिहरू
हुन्डीबाट गरिएको कारोबार अवैधानिक हो । त्यसैले, यो दण्डनीय छ । नेपालमा हुन्डी कारोबारको अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग हो । हुन्डी कारोबार गरेको थाहा पाए विभागले कारबाहीका प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।
यसबाहेक हुन्डीमार्फत गरिने कारोबारमा जोखिम बढी हुन्छ । पठाएको रकम बीचैमा हिनामिना हुने पो हो कि ? या, आफूू रकम पठाएको एजेन्ट पक्राउ पो प¥यो कि ? जस्ता डर मनमा भइरहन्छन् । जबसम्म आफन्तको हातमा पैसा पुगेको खबर पाइँदैन तबसम्म पैसा पठाउनेलाई चिन्ता भइरहन्छ ।
उपत्यकामा अवैध हुन्डीको कारोबारमा तीव्रता आएको छ । केही पहिले अचाक्ली रूपमा यसको कारोबार हुन थाले पनि बीचमा सुस्तता आएको थियो । पछिल्लोपटक प्रहरी कारबाही प्रभावकारी हुन नसक्दा फेरि अवैध हुन्डी कारोबारले तीव्रता लिएको बताइएको छ ।
करिव डेढ वर्ष अघि अर्थात २०७४ भदौमा राजस्व अनुसन्धान विभागले पहिलोपटक हुन्डी कारोबारीविरुद्ध ठूलो कारबाही गर्दै चार अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो ।
महानगरीय अपराध महासाखामा एसएसपी धिरजप्रताव सिंह आएपछि त्यस्ता अवैध हुन्डी करोबारीसँग सेटिङ मिलेकाले उनीहरूले निर्वाध रूपमा सो काम गरिरहेको बताइएको छ । त्योबेला ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बिगोबराबर जरिवानाको मागदाबीसहित सुन्धाराको जेबो ट्राभल्समा दलबहादुर पुन, लवकुमार नेपाल, धर्म गुरुङ र मिलन गुरुङविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । उनीहरूलाई अदालतले जरिवाना र दुई वर्ष जेल सजाय तोकिसकेको छ ।
त्यसपछि हुन्डी कारोबारीविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै ठूलो कारबाही हुन सकेको नसकेको बताइएको छ । महाशाखाले उपत्यकाका हरेक कुना–कुनामा घुमुवा राख्ने र सबै सुचना संकलन गर्ने तर कारवाहीमा उत्रिन भने खुट्टा कमाउने गरेको बताइएको छ । प्राप्त सूचनाका आधारमा मोलतोल गर्ने र हुन्डी सञ्चालकहरूबाट प्रहरीको उच्च तहको अधिकारीहरूसम्म रकम पु¥याउने गरेको बताइन्छ ।
अबैध हुन्डीको कारोबार गर्ने व्यापारीविरुद्ध प्रहरीले अप्रेसन चलाए पनि ठूला कारोबारीसम्म भने प्रहरी पुग्न अझै सकेको छैन । कारोवारको नेक्सस पत्ता लगाउन नसकेर प्रहरीले कारवाही नचलाएको नभई उक्त धन्दामा प्रहरीकै संरक्षण रहेकोले प्रहरी रमिते बनेको बताइन्छ ।
यसले गर्दा कारोबार मौलाउने क्रम बढेको छ । अस्ट्रेलियामा हुन्डीको नाममा फेसबुक, भाइबर र इमोमार्फत प्रचार गरी त्यहाँका नेपालीहरूको रकम अवैध रूपमा हुन्डीमार्फत आइरहेको बताइन्छ । त्यस्ता कारोवार गर्ने गिरोहहरू नेपालमा ट्राभल एजेन्सी तथा कन्सल्टेन्सीको आवरणमा क्रियाशील भएका छन् । विदेशमा रहेका त्यस्ता गिरोहले शैक्षिक परामर्शदाता केन्द्रमार्फत अभियान नै चलाएको बताइन्छ । यसरी प्रचार गर्ने गिरोहमा एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरू संलग्न रहेको तथ्य भेटिएको छ । अपराध महाशाखाका प्रहरीसँग सेटिङ मिलाएर कारोबार गरेको हुँदा आफूहरूलाई कसैले पनि केही गर्न नसक्ने बताउने गरेको एक ट्राभल्सका सञ्चालकले वताए।
खुलमखुल्ला यसरी हुन्डीको कारोबार हुने क्रममा गत वर्ष दुई कारोबारीबीच विवाद हुँदा घटना अपराध महाशाखासम्म पुगेको थियो । तर त्यो समयदेखि महाशाखाले खुद्रे कारोबारीलाई समातेर प्रचार गरे पनि ठुला कारोबारीसम्म भने पुग्न सकेको छैन । अवैध हुन्डीलाई नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले मातहतका निकायमा पत्राचार गरेको पनि थियो तर त्यसको कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।
कालोधन सुरक्षित पार्ने माध्यम
राज्यले प्रतिबन्ध लगाए पनि प्रहरी, प्रशासन र केही कारोबारीको मिलेमतोमा नेपालमा खुलेआम हुन्डी चलिरहेको छ। अस्ट्रेलियाबाट मात्र हरेक दिन १० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ हुन्डीमार्फत नेपाल आउने गरेको स्रोत बताउँछ । अस्ट्रेलियामा एउटा समूहले पैसा उठाउने गर्दछ भने अर्को समुहले त्यसलाई हङकङ पठाउने र तेश्रो समुहले नेपालमा पैसा दिने गरेको पाइएको छ । खातावाल फरक–फरक देखिने गरेर गिरोहले कारोबार गर्दै आएको छ ।
नेपालमा कमाएको ‘कालो धन’ लाई सुरक्षित पार्ने एउटा माध्यम पछिल्लो समय हुन्डी बनेको छ । हुन्डीमार्फत पैसा पठाउने र छोरी–छोरीका नाममा घर र ब्यवसाय किनेर आफ्नो भविष्य सुरक्षित पार्ने काममा पनि हुन्डीले साथ दिन थालेको छ ।
नेपालबाट हुन्डीमार्फत पठाएको पैसा बैंकमार्फत नेपाल फर्काएर छोरा छोरीले कमाएको भन्दै वैध बनाउने अर्को धन्दा पनि चलेको छ । अवैध रूपमा नेपालबाट भारत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र खाडी मुलुकमा बढी मात्रामा हुन्डीमार्फत कारोबार हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।
रेमिन्ट्यान्सले चलेको मुलुकमा करिब ६० प्रतिशत मात्र रकम राज्यको कानुनी निकायबाट स्वदेश भित्रिने गर्छ । बाँकी चालिस प्रतिशत हुन्डीबाट भित्रिने गरेको छ । यसलाई अनियन्त्रित रूपमा छाडिदिने हो भने ठूलो अंकमा राजस्व छली त छँदै छ, त्यसैगरी स्रोत नखुलेको सम्पीत्त बढ्ने र समस्या पर्नेm बताइन्छ ।
हुन्डी कारोबार गर्नेमा सेयर ब्रोकर पनि
सेयर बजार घट्दा लगानीकर्ता तनावमा छन् । कति लगानीकर्ता बैंकको कर्जा तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने त्रासमा छन् । तर पछिल्लो समय सेयर ब्रोकर कम्पनी समेत कालोसूचीमा परेका छन् । सेयर ब्रोकरको काम गर्दै आएको आशुतोष ब्रोकर एण्ड सेक्युरिटी प्राइभेट लिमिटेडलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको छ ।
कम्पनीका सञ्चालकहरू दीपककुमार अग्रवाल, लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, राजेशकुमार अग्रवाललाई पनि कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको छ ।बैंकबाट लिएको कर्जा तोकिएको समयमा भुक्तानी नगर्नेलाई बैंकको सिफारिसमा केन्द्रले कालोसूचीमा राख्छ । बैंकसँगको सम्झौताअनुसार कर्जा नतिरेका ७ हजार १५९ कम्पनी तथा व्यक्तिलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको छ । आशुतोषले काठमाडौं र इटहरीबाट सेयर ब्रोकरको काम गर्दै आएको छ । यो कम्पनीका मालिकहरू हुन्डी कारोबारी भएको र उनीहरू प्रायः भारतमा लुकीछिपी बस्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । मालिकहरूले अशोककुमार झालाई कम्पनी सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएका छन् । स्रोतका अनुसार आशुतोषले केही लगानीकर्तालाई दिएको चेक बाउन्स भएको छ । उक्त कम्पनीमा १७ वर्षदेखि काम गर्दै आएको सन्तोष भुर्तेल पनि गलत कारोबार विवादमा तानिएका छन् । कालोसूचीमा परेपछि उक्त कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुन सक्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्बद्ध स्रोतले बतायो । धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ को दफा १८ का आधारमा आशुतोषको ब्रोकर लाइसेन्स खारेज हुन सक्ने स्रोतले जनाएको छ ।
सर्वा चार अर्ब बिगो दाबी
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हुन्डी कारोबार गर्ने सात जनाविरुद्ध चार अर्ब १४ करोड रुपैयाँको बिगो दाबीसहित एक वर्ष अघि नै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागलेसो राशिको बिगोसहित दलबहादुर पुन, लवकुमार नेपाल, मिलिमा थामी राई, राजेन्द्र गुरुङ, विद्यादेवी गुरुङ, मिलन गुरुङ र धरम गुरुङविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
डेढ वर्षअघि काठमाडौं प्रहरीले सुन्धाराको जेबो ट्राभल्समा छापा मारी १२ लाख रुपैयाँ विदेश पठाउन लागिएको हुन्डी रकम जफत गरेको थियो । हुन्डीसहित कम्पनीबाट कामदार पुन र नेपाललाई पक्राउ गरिएको थियो । सो ट्राभल्सका मालिक मिलन र धरमले विदेशमा बसेर हुन्डी कारोबार गर्ने गरेका थिए । अहिले पनि उनीहरू फरार छन् । प्रहरीले छापा मार्दा ट्राभल्सबाट राजेन्द्र र विद्यादेवीका नाममा काटिएको ५० लाख रुपैयाँको चेकसमेत जफत गरेको थियो । विभागले ट्राभल्सको तथ्यांक राख्ने कम्प्युटर जफत गरेर अध्ययन गर्दा साढे चार महिनाको तथ्यांकमा ४ करोड रुपैयाँको हुन्डी रकम देखिएको थियो ।